Akụkọ - Igwe mara mma nke ụlọ nchara na nhazi usoro
Njirimara ụlọ nchara nchara nchara na nhazi usoro
Light steel villa, nke a makwaara dị ka ụlọ ihe eji eme ihe nchara, ihe bụ isi ya bụ nke a na-eji ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke aluminom ígwè site na ngwangwa teknụzụ na-acha ọkụ.
Ngwongwo aluminom-zinc nke aluminom-zinc plated nchara bu 55% aluminom, 43.4% zinc na 1.6% silicon siri ike na 600℃. Ihe owuwu a nile bu nke aluminom-iron-silica-zinc, na-eme nkpuru okpukpu ano di nkpuru, si otú a na-eme nkpuchi nke ihe mgbochi siri ike ma di irè iji gbochie ihe ojoo ka o banye.
Njirimara nchara nchara
1. Nguzogide mmebi
Nguzogide nke corrosion nke “55% aluminom-zinc coils” na-esite na mgbochi mgbochi nke aluminom na nchebe nke onyinye nke zinc.When zinc na-achụrụ iji chebe akụkụ ndị a kpụchapụrụ, ịchacha, na ọkọcha nke mkpuchi ahụ, aluminom na-etolite ihe mkpuchi oxide anaghị edozi. nke a na-eme dị ka ihe mgbochi.Aluminium-zinc alloy steel coils ka anagide ule n'èzí n'ile anya karia 20 afọ n'okpuru onodu ikuku di iche iche, ma egosiputala na 55% aluminium-zinc alloy steel coils nwere nkpuchi onu kacha mma karia kpaliri. na 5% aluminum-zinc alloy ígwè coils.
2. Okpomọkụ na-eguzogide:
Nguzogide ọkụ nke 55% aluminom-zinc alloy steel plate dị mma karịa nke efere ígwè a na-enweta galvanized, na nnukwu ikpo ọkụ nke oxidation nke aluminom plated steel plate is similar.Aluminized zinc alloy steel plate can be used in high temperature environment up to 315 ogo.
3. Ntughari uche:
Mpempe akwụkwọ nchara ígwè nke 55% aluminom-zinc nwere nnukwu ntụgharị, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbochi na-eguzogide okpomọkụ.Aluminized zinc sheets nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ọkụ ọkụ nke mpempe akwụkwọ, n'ihi ya enwere ike iji ha dịka ụlọ na ogwe na-enweghị agba iji chekwaa ike.
4. agba onwunwe:
N'ihi ezigbo nrapado dị n'etiti akwa zinc na agba nke efere aluminized aluminized, enwere ike ịse ya na enweghị ndọtị na ọgwụgwọ ihu igwe mgbe ejiri ya dị ka bọọdụ maka ebumnuche izugbe.
Ìhè ígwè villa usoro ỌdịdịỌdịdị mgbidi mgbidi dị nchara, site na nchara nchara ígwè na ogidi na akara na nhazi nke ike nkịtị, ihe ngosipụta nke anụ ahụ dị oke mma, oge iwu ahụ dị mkpụmkpụ, mmetụta mkpuchi dị mma, bụ ụdị nchekwa ọkụ ọkụ ọhụrụ. na usoro nchedo gburugburu ebe obibi.
1. Ntọala usoro
Onu ogugu nke onwe ulo nke ulo nchara di oku bu oku, nke bu ihe dika 1/5 nke ulo ihe eji eme brik na 1/8 nke ulo ulo ewusiri ike, ya mere o nwere ike belata onu ahia nke ntọala. Ntọala nke ụlọ nchara ọkụ na-ejikarị ntọala ntọala.
(1) ìhè ígwè Ọdịdị ìhè arọ, nwere ike belata nke na-eri nke isi injinịa;
Ngwurugwu nke mmiri na-egosi nke ntọala nwere ike igbochi mwakpo nke mmiri na gas na-emerụ ahụ;
(3)Ezi uche arịlịka mode iji hụ na a pụrụ ịdabere na njikọ nke ntọala na isi ahu.
2. Mgbidi usoro
Usoro mgbidi dị n'èzí bụkarị n'etiti 120-200㎜, n'ihi na mgbidi ahụ dị nfe ma dị njọ, ebe eji eme ihe eji eme ụlọ ụlọ nchara na-abawanye site na 10% -15% karịa ụlọ ọdịnala, mpaghara eji eme ihe na-abawanye karịa 90% karịa ụlọ ọdịnala, oghere dị n'ime nwere ike na-agbanwe nkewa.Pipeline nwere ike idozi na mgbidi, ala na ụlọ akụrụngwa debeere oghere, zoro ezo dị mma, mara mma.
(1)Mgbidi ahụ jupụtara na eriri eriri iko, nke nwere arụmọrụ dị mma nke nchekwa ọkụ, mkpuchi ọkụ na mkpuchi ụda;
(2) akwụkwọ iku ume na-enweghị mmiri ma na-eku ume, nke nwere ike ịhazi iru mmiri ikuku dị n'ime ụlọ, mee ka ndị dị ndụ nwee ntụsara ahụ, ma gbochie mmụba nke ebu n'ime mgbidi ahụ;
Na pipeline na-eli na mgbidi na ọ dịghị ogide n'ime ụlọ ohere.
3. Usoro ala
Ejiri ụdị C-ụdị na-acha ọkụ ọkụ dị elu na ndị òtù nchara na-acha ọkụ ọkụ. A na-ahazi ogidi ala dị ka usoro modulu na nha anya spacing hà. Ejiri mpempe akwụkwọ kpuchie ogwe osisi ahụ nke na-eme ka mmiri sie ike ma na-egbochi ya, na-akpụ usoro sistemụ siri ike.
(1) Structural efere na ala ígwè doo jikọtara Ọdịdị, ike na anụ;
(2) ụdị mmiri na paịpụ eletrik dị iche iche zoro ezo na ngwongwo ala ahụ ma ghara ịdị elu nke ụlọ ahụ;
(3) A na-ejupụta owu eriri iko ahụ na interlayer, na mmetụta nke ichebe ọkụ na mkpuchi ikpo ọkụ, nsị ụda na mkpuchi mkpuchi dị ịrịba ama.
4. flọ usoro
A na-enwe ọtụtụ ihe nchara dị iche iche nke ụlọ dị iche iche. N'ozuzu, e nwere truss triangular na T-truss truss, nke nwere ike n'ụzọ dị mfe ma na-agbanwe n'ụzọ dị mfe ịmegharị ụdị ụlọ dị mgbagwoju anya. N'ozuzu, a na-eji paịlị dị egwu na-acha uhie uhie, nke nwere arụmọrụ mmiri na-adịghị mma ma na-egosipụta mma na mma.
(1) Thelọ ndị mejupụtara nwere ọrụ nke mmiri ozuzo, nkwụsị ihu igwe, mkpuchi ikpo ọkụ, wdg, nke nwere ike nweta ọtụtụ ụdị ịme ngosi uwe;
Ventilashion mgbasa imewe, mgbe niile ka ikuku ọhụrụ.
5. Ihe owuwu
A na-eji ígwè nwere galvanized ígwè rụọ ọrụ niile iji wee hụ na ọrụ ụlọ nke ụlọ ahụ. A na-eme ka akụkụ ihe nrụpụta niile bụrụ ihe nrụpụta site na nkenke igwe nrụpụta ọrụ, na izi ezi nke akụkụ bụ milimita, nke na-enweghị atụ na akụkụ ndị ọzọ.